Duqaymo Ruushku ka Gaystay Dalka Suuriya oo ay ku Dhinteen Dad ka Badan 34 Qof | shiniilenews.com
Duqaymo Ruushku ka Gaystay Dalka Suuriya oo ay ku Dhinteen Dad ka Badan 34 Qof
Dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha dalka Suuriya ayaa sheegay in duqeyn ay fuliyeen diyaaradaha Ruushka ay ku dhinteen ugu yaraan sodon iyo afar qof oo rayid ah, kuwaa oo ka qaxayay dagaalka ka socda meel u dhaw magaalada Deir al-Zour.
Kooxahani waxaa ay shegeen in dadka dhintay ay kamid yihiin caruur, waxayna isku dayayeen inay ka gudbaan webi halkaasi ku yaala.
Diyaaradaha dagaalka ee Ruushka ayaa qeyb ka ah dullaanka ay ciidamada dowlada Suuriya ka wadaan guud ahaan dalkaasi.
Warbaahinta dowladda dalka Suuriya ayaa dhawaan kusoo warantay in ciidamada dowlada iyo xulafadooda ay gareen saldhig ay lahayeen ciidamada cirka ee dalkaasi oo ku yaalo dulleedka magaalad Deir ez-Zour.
Qabsashada Deir ez-Zour ayaa soo afjartay go’doon ay kooxda isugu yeerta khilaafada Islaamka ee daacish ku hayeen saldhigaasi.
Horaanti toddobaadkan, ciidamada milateriga Suuriya ee uu taageero Ruushka ayaa qabsaday qeybo kamid ah magaladaasi, waxaana halkaasi ay ku go’doomiyeen kumanaan rayid ah iyo ciidamo halkaasi ku sugnaa tan iyo sanadkii 2015-ka.
Magaalada Deir ez-Zour ayaa ah magaalo qani ku ah shidaalka, taa oo istaraateji ahaan u wanaagsan ciidamada dowladda.